Xaqiiqda coronavirus - Immisa ayaa ka soo kabsaday? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xaqiiqda coronavirus – Immisa ayaa ka soo kabsaday?
Xaqiiqda coronavirus – Immisa ayaa ka soo kabsaday?
Welwelka waxaa xukuma dad badan maadaama tirada cudurrada coronavirus iyo dhimashada ay kor u kacaan, laakiin waxaa jira kuwa ka soo kabanaya, lambaradaasna ma fududa.
Isniintii, warbaahinta Shiinaha ayaa ku warrantay in tirada dadka ka soo kabsaday fayraska Coruna ay ahayd qiyaastii saddex meelood meel tirada cudurrada laga diiwaan geliyey dhul weynaha Shiinaha.
Wargayska South China Morning Post ayaa sheegay in, marka loo eego tirooyinka rasmiga ah, 1846 qof ayaa dhawaan lagu dawaynayay cusbitaalka dalkaasi.
Tani waxay ka dhigeysaa wadarta guud ee ka soo kabatay Shiinaha 24,940 illaa duhurkii Isniinta.
Illaa iyo hadda, tirada guud ee dhaawaca shiinaha ayaa gaadhay 97,359, halka tirada dhimashadu ay gaadhay 2592, sida lagu sheegay tirooyinka ka soo baxay Guddiga Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha.
Mas’uuliyiinta Shiinaha ee ku sugan gobolka Guangdong ee koonfurta ayaa hoos u dhigay heerarkooda feejignaan ee cudurkan, iyada oo ay jiraan calaamado muujinaya in cudurkan dilaaga ah uu jiro, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha.
Waxay tilmaamtay in gobolku maanta qaadan doono heerka labaad ee wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah, ka dib markii ay raacday xaaladdii degdegga ahayd ee heerka koowaad, oo ah heerarka ugu daran ee looga jawaabo musiibooyinka iyo dhibaatooyinka.
Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka, ma jiraan daweyn gaar ah oo loogu talagalay cudurka uu keeno cudurka ‘coronavirus’ oo soo baxay.
Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah astaamaha waa la daaweyn karaa, sidaa darteed daaweyntu waxay kuxiran tahay xaaladda bukaan-jiifka bukaan-jiifka. Caawinaad la taaban karo oo loogu talagalay dadka cudurka qaba waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah.
Shirkado badan oo adduunka ah ayaa sheegaya inay hadda tijaabinayaan dawooyin wax ku biirin kara daaweynta fayraska, oo ku faafay in ka badan 30 waddan, laakiin aan wali la oggolaan.
Howlgal habeenkii saddexaad laga sameeyay Xaafado ka tirsan Muqdish